Alahlwayo razor, Double Edge razor, 3 Blade alahlwayo razor - Jiali
Kubandakanya izinsingo kusuka ku-blade eyodwa kuya kwensimbi eyisithupha futhi zombili zitholakalela ezilahlwayo nensingo yohlelo.
Ibha yomswakama ebanzi ebanzi iqukethe iVitamin E ne-Aloe Vera.Isibambo eside nesiwugqinsi sinikeza ukulawula okuhle nokunethezeka.
Ikhishwe endaweni ehlanzekile. Ikama elikhethekile elenzelwe ukususwa kwezinwele kalula. Zonke izinsingo zinesitifiketi se-FDA.
Kwenziwe kusuka eSweden okungenasici. Ubuchwepheshe bokugaya nokumboza baseYurophu buqinisekisa ubukhali nokunethezeka.
Ezithathekayo Shona Abesilisa Alahlwayo Nezimo Nezimo ...
Isibambo Soft blade ezintathu design classical amadoda di ...
Super Premium alahlwayo alahlwayo Five Open Ba ...
Uhlelo lwesithupha lwe-Open Back Blade Mens Razor Sha ...
Ikhwalithi ephezulu ukuphepha insimbi engagqwali blad kathathu ...
Economic isibambo eside alahlwayo Kathathu Blade Wo ...
Personal Care Engagqwali Abesifazane alahlwayo ...
Intsingo yesalukazi encane ebhokisini lepulasitiki elihle le ...
Isizwe Esithumela Kuso
Unyaka kaJiali Usungulwe
Umkhiqizo Wokuthengisa Ivolumu
Lunjani izinga lakho lezinsingo?
I-Ningbo Jiali ingumkhiqizi wensimbi ochwepheshe onomlando weminyaka engama-25. Zonke izinto zensimbi nobuchwepheshe kuvela eYurophu. Izinsingo zethu zinikela ngesipiliyoni sokushefa esihle futhi esiqinile.
Abathengi bahlala bekhokha kakhulu egameni lomkhiqizo esikhundleni somsebenzi wensingo. Izinsingo zethu zishefa kanye nezinophawu kodwa ngezindleko eziphansi kakhulu. Kuyisinqumo esihle kuwe.
Sinezidingo zobungako obuncane kuma-oda amaningi kepha sizobheka nesimo sakho semakethe esithile ukuthi siyakusekela. Ukuhlomulisana ngokuhlanganyela njalo kuyinto eza kuqala.
Sicela ushiye imilayezo futhi sizothintana kungakapheli amahora angama-24.
UNovemba 13, 2020
Lapho ushefa imilenze, izikhwama zangaphansi noma indawo yebhayisikili, ukuthambisa kahle umzimba kuyisinyathelo sokuqala esibalulekile. Ungalokothi uphuce ngaphandle kokuqala ukuswakama izinwele ezomile ngamanzi, ngoba izinwele ezomile kunzima ukuzisika nokuhlephula umphetho omuhle wensingo. I-blade ebukhali ibalulekile ekutholeni ukusondela, ukunethezeka, ukucasuka -...
Ukushefa phakathi neminyaka
Uma ucabanga ukuthi umzabalazo wamadoda wokususa izinwele zobuso ungowesimanje, sinezindaba zakho. Kunobufakazi bemivubukulo bokuthi, kuLate Stone Age, amadoda agundiwe ngetshe, i-obsidian, noma i-clamshell shards, noma ama-clamshell asetshenzisiwe njengama-tweezers. (Ouch.) Kamuva, amadoda azame ngethusi, iphoyisa ...
Izinyathelo ezinhlanu zokushefa okukhulu
Ukushefa okuseduze nokunethezeka, vele ulandele izinyathelo ezimbalwa ezibalulekile. Isinyathelo 1: Geza insipho efudumele namanzi kuzosusa uwoyela ezinweleni nasesikhunjeni sakho, futhi kuzoqala inqubo yokuthanjiswa kwentshebe (okungcono, shava ngemuva kokugeza, lapho izinwele zakho zigcwele ngokuphelele). Isinyathelo 2: Thambisa izinwele zobuso ngezinye ...